Kaararka khariidadaha Google Earth-ka soo qaado - Gofumed
Sebtember, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Ilaa hadda sida aan ognahay, ma jiro barnaamij (weli) oo hoos u dhigi kara waddooyinka Google Earth qaabka vector. Inkasta oo ay ka dhici karto Khariidadaha Furan ee Furan, waa mid aan naxariis lahayn oo aan magaalooyin lahayn.
Laakiin haddii qof uu xiiseynayay waddooyinka Google Earth, ka dib markaad ka baxdo waa inaad u soo qaadatid sawir ahaan, ka dibna ku dhejisid bahalka iyaga. Halkan waxaa ku qoran talooyin lagu yareynayo heerka dareenka:
1. Ku dhaji sawirka madow
Tani waxaan samaynaa, si sawirka satellite-ka aanu wax u dhicin iyo hagaajinta muuqaalka wadooyinka. Sawirka qaabka bmp ee madow waxaa lagu sameeyaa Mspaint waxaana loo yaqaan 'Google Earth', isaga oo ku soo jiidanaya meesha xiisaha leh.
2. Sawir sawir leh Stitchmaps
Hadda, isticmaalka Maqaarka, waxaan dooranay masaajo noo ogolaaneysa in aan aragno qoraallada dhumuc ka yar kan jiidka waddada.
Eeg sida, inkasta oo Google Earth aysan aragin dhamaan waddooyinka sare ee image, Stitchmaps dhamaantood, waxaan dooraneynaa heer sare, kiiskan 384.
Marka masaajidka la qeexo, waxaanu amar ku bixinnaa inaan soo dejinno, oo aan sugno in masaajidka la raaco. Ugu dambeyntii waxaan ku duubnay qaabka tifaftirka, iyo faylka qalabka loogu talagalay OziExplorer (.map). Sawirka wuxuu u egyahay sidaan: sawirka dhinaca midigta waa dheere:
Sida waalidku, haddii aan rabno inaan u badalno .ecw, gudaha Khariidadda Caalamiga ah waan soo qaadannaa, waxaan u qoondeeyneynaa qiyaasta waxaanan u sheegeynaa in ay saxaan faylka .map. Markaas waxaad u dhoofi kartaa .ecw si aad uga faa'iidaysato barnaamijka kale.
3. Ku digee barnaamijka qorshaynta
Khadka saxda ah ee xariiqa wuxuu noqon karaa mid xanaaq badan, haddii aad rabto inaad dhaqso u dhaqaajiso, waxaad isticmaali kartaa barnaamij mashruuc oo toos ah, sida Microstation Descartes.
Waxaa la fahamsan yahay in imageec .ecwaa la jajabiyey, (inkastoo ay la samayn karo laga bilaabo Descartes), waxa soo socda waxa weeye inaan bedelno muuqaalka si loo jaangoynayo, isla nidaamka aan tusno boostada hore.
Samee maaskaro for tones jaalle ah, iyo mid kale oo loogu talagalay garaacyada cawlka ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa inaad u beddesho vector leh nadiifinta topological. Qaybta aan qoraalka ahayni ma abuuri doonto vektor, waxaan ku qasbanaaneynaa inaan ururka ka dhigno cagta, inkastoo haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato Descartes, waxaad ku beddeli kartaa dhammaan codadka qoraalka ee dariiqa jidka, sidaas darteed Waxaan ka dhigay yar yar. Haddii qoraalka la jaangoynayo, waxaa loo isticmaalaa qoraalka qoraalka ah.
4. Haddii aan la helin Microstation Descartes
Sidoo kale waa inay la shaqeeyaan isla AutoDesk Design Raster, ArcScan, GIS kala cayncayn ah, iyo xitaa Corel Trace.
AutoDesk Google Earth GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous 10 jawaabo xiiso leh
Post Next Isku Dayay 2009 FinalkaNext »
5 Jawaab in "Download Khariidadaha Google Street Map"
Maqaalka wuxuu ka yimid 2009 waxaana diiradda lagu saaray baahida loo qabo in lagu sameeyo hawsha loo yaqaan 'Trace - Microsation function'. Waxaa jira maqaallo kale oo sharxay sida loo sameeyo OSM iyadoo la adeegsanayo QGIS.
iyo sababta aadan u isticmaalin qgis oo aad iska ilaaliso tallaabooyin badan iyo shaqo
Live Mexico! isagu wuxuu leeyahay:
Waxay kuugu yeerayaan halkan http://geomarketingspain.blogspot.com/
Hi Javier, Inkscape waa mid aad u jimicsi badan oo loo yaqaan 'Corel Draw'
Waxaan ku darayaa Inkscape (bilaash ah) si aad u faafiso